Tourism Observer: ZIMBABWE: CAA Woeing Lufthansa To Start Flights
ZIMBABWE: CAA Woeing Lufthansa To Start Flights
Following the opening of the new Victoria Falls International Airport and the success to bring airlines to fly to the new facility ,South African now uses an Airbus A330 for the service while Ethiopian launched flights two weeks ago and Kenya Airways will follow suit in a few weeks time,Zimbabwe Civil Aviation Authority now widened their horizon.
After attending the annual general meeting of the Airports Council International in Lusaka / Zambia recently did new emerge that ZCAA has made serious overtures to Germany's Lufthansa to return to not just Harare but also consider a combined flight to Victoria Falls and a fifth freedom rights onward service to a final destination in Southern Africa.
Nothing could be found out about Lufthansa's reaction to the proposals made but it would be a major coup for the Zimbabwean aviation regulators if an airline of such reputation could return to the country.
LH had to halt services to Harare nine years ago over their inability to repatriate ticket sales and only iron clad assurances that remittances will be made possible as and when requested might persuade the German airline giant to give Zimbabwe a fresh look.
Germany is a major source market for tourists to Zimbabwe who often combine a visit to Victoria Falls with safaris across the country, to explore the Great Zimbabwe Ruins and Matopos National Park's scenic rock formation before moving on to other Southern African countries like Zambia, Botswana, South Africa and Namibia as part of their African journeys.
Labels: Great Zimbabwe ruins, kenya airways, Matopos National Park, Victoria Falls International Airport